सोनोकेमिस्ट्री रसायनको क्षेत्र हो जहाँ उच्च-तीव्रता अल्ट्रासाउन्ड रासायनिक प्रतिक्रियाहरू (संश्लेषण, क्याटालिसिस, गिरावट, पोलिमेराइजेशन, हाइड्रोलिसिस इत्यादि) लाई प्रेरित गर्न, गति दिन र परिमार्जन गर्न प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पन्न cavitation अद्वितीय ऊर्जा घनी अवस्था, जो प्रचार र रासायनिक प्रतिक्रिया गहन तीव्रता द्वारा विशेषता हो। द्रुत प्रतिक्रिया दर, उच्च उत्पादन र हरियो, हल्का अभिकर्मकको प्रयोगले सुधार गरिएको रासायनिक प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्न सोनोकैमिस्ट्रीलाई धेरै फाइदाजनक उपकरणमा परिणत गर्दछ।
सोनोकेमिस्ट्री अनुसन्धान र प्रसंस्करण क्षेत्र हो जहाँ अणुहरूले रासायनिक प्रतिक्रिया भोग्छन् किनकि उच्च-तीव्रता अल्ट्रासोनिकेसनको प्रयोगको कारण (जस्तै, २० kHz)। सोनोकेमिकल प्रतिक्रियाहरूको लागि जिम्मेवार घटना ध्वनिक गुहिकासन हो। ध्वनी वा अल्ट्रासोनिक cavation तब हुन्छ जब शक्तिशाली अल्ट्रासाउंड तरंगहरू तरल वा घोलमा जोडिन्छ। तरलमा पावर अल्ट्रासाउंड तरंगहरू द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक उच्च-प्रेशर / कम-दबाव चक्रको कारण, भ्याकुम बबलहरू (cavitational voids) उत्पन्न हुन्छन्, जुन धेरै दबाव चक्रहरूमा बढ्छ। जब cavitational वैक्यूम बबल एक निश्चित आकारमा पुग्छ जहाँ यसले अधिक ऊर्जा लिन सक्दैन, भ्याकुम बबल हिंस्रक रूपमा उत्प्रेरित हुन्छ र अत्यधिक उर्जा-घन तातो ठाउँ सिर्जना गर्दछ। यो स्थानीय रूपमा देखा पर्ने तातो ठाउँ एकदम उच्च तापक्रम, दवाव र अत्यधिक द्रुत तरल जेट्सको माइक्रो-स्ट्रिमि .को विशेषता हो।
सोनोकेमिकल रिएक्टर: तीव्र Sonication र परिणामस्वरूप cavation शुरू र रासायनिक प्रतिक्रियाहरु गहनता र पनि पथ स्विच गर्न सक्छन्।
ध्वनिक काभेटेशन र उच्च-तीव्रता अल्ट्रासोनिकेसनको प्रभावहरू
ध्वनिक काभेटेशन, जसलाई अक्सर अल्ट्रासोनिक काभेटेशन पनि भनिन्छ, दुई रूपमा छुट्याउन सकिन्छ, स्थिर र क्षणिक cavitation। स्थिर उत्खननको समयमा, cavitation बुलबुले यसको सन्तुलन त्रिज्याको वरिपरि धेरै चोटि दोहोरिन्छ, जबकि क्षणिक cavitation समयमा एक छोटो समयको बुलबुले केही ध्वनिक चक्रमा नाटकीय मात्रा परिवर्तन हुन्छ र हिंसात्मक पतनमा समाप्त हुन्छ (Suslick 1988)। स्थिर र ट्रान्जियन्ट cavitation एक साथ समाधानमा हुन सक्छ र स्थिर बृद्धि भइरहेको एक बुलबुले एक क्षणिक गुहा हुन सक्छ। बन्बल प्रवाह, जो क्षणिक cavitation र उच्च-तीव्रता Sonication को विशेषता हो, विभिन्न शारीरिक अवस्था सिर्जना गर्दछ धेरै very००-२–,००० K को उच्च तापमान, धेरै १००० बार सम्म दबाव, र १०००m / s को वेगको तरल स्ट्रिमहरू सहित। पछाडिको पछाडि पतन / उत्तेजित हुँदा नानोसेकेन्ड भन्दा कममा देखा पर्छ, धेरै उच्च तताउने र चिसो दर १० भन्दा बढीमा11 K / s अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस्तो उच्च ताप दर र दबाव भिन्नताहरू सुरूवात गर्न र प्रतिक्रियाहरूलाई तीव्र गर्न सक्दछ। उत्पन्न हुने तरल स्ट्रिमहरूको बारेमा, जब यो विषम ठोस – तरल पदार्थको स्लरीको कुरा आउँछ भने यी उच्च-स्पीड माइक्रोजेट्सले विशेष गरी उच्च फाइदा देखाउँदछ। तरल जेट्स सतहमा पूरै तापक्रम र संकुचित बुलबुलेको दबाबसँग मिल्छ र इन्टरपार्टिकल टकरावका साथै स्थानीय पग्लनको माध्यमबाट क्षरण निम्त्याउँछ। नतिजा, समाधान मा एक महत्त्वपूर्ण सुधार जन हस्तान्तरण मनाइन्छ।
अल्ट्रासोनिक काभेटेशन सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा तरल पदार्थहरूमा उत्पन्न हुन्छ र सोल्ट्स विट लो वाफ प्रेशरमा। तसर्थ, कम वाष्प प्रेसहरू भएको मिडिया सोनोकेमिकल अनुप्रयोगहरूको लागि अनुकूल छन्।
अल्ट्रासोनिक काभेटेशनको नतिजाको रूपमा, सिर्जना गरिएका तीव्र शक्तिहरूले प्रतिक्रियाहरूको मार्गहरूलाई अझ बढी कुशल मार्गहरूमा बदल्न सक्छन्, ताकि अधिक पूर्ण रूपान्तरण र / वा अनावश्यक उप-उत्पादहरूको उत्पादनलाई वेवास्ता गर्न सकिन्छ।
Cavation बुलबुले को पतन द्वारा बनाईएको ऊर्जा-घनी ठाउँ तातो ठाउँ भनिन्छ। कम फ्रिक्वेन्सी, २० किगाहर्ट्जको दायरामा उच्च-शक्ति अल्ट्रासाउन्ड र उच्च एम्प्लिट्यूडहरू सिर्जना गर्ने क्षमता गहन तातो-स्पटहरू र अनुकूल सोनोकेमिकल अवस्थाहरूको उत्पादनको लागि राम्रोसँग स्थापित छ।
अल्ट्रासोनिक प्रयोगशाला उपकरणका साथसाथै वाणिज्यिक सोनोकेमिकल प्रक्रियाहरूको लागि औद्योगिक अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू सजिलैसँग उपलब्ध छन् र प्रयोगशाला, पायलट र पूर्ण-औद्योगिक स्तरमा विश्वसनीय, दक्ष, र वातावरणीय अनुकूलको रूपमा उपलब्ध छन्। सोनोकेमिकल प्रतिक्रियाहरू ब्याचको रूपमा (जस्तै खुला जहाज) वा बन्द-प्रवाह सेल रिएक्टरको प्रयोग गरेर इन-लाइन प्रक्रिया गर्न सकिन्छ।
औद्योगिक अल्ट्रासोनिकेटर UIP2000hdT (2kW) Sonochemical इनलाइन रिएक्टरको साथ।
Sono-synthesis वा Sonochemical synthesis रासायनिक प्रतिक्रियाहरू आरम्भ गर्न र प्रमोट गर्न अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पन्न cavitation को प्रयोग हो। उच्च-शक्ति अल्ट्रासोनिकेशन (उदाहरण, २० kHz मा) अणु र रासायनिक सम्बन्धमा कडा प्रभाव देखाउँदछ। उदाहरण को लागी, गहन Sonication को परिणामस्वरूप Sonochemical प्रभाव को विभाजन अणुहरु, फ्रि रेडिकलहरू सिर्जना गर्न, र / वा रासायनिक मार्ग स्विचिंग परिणाम हुन सक्छ। सोनोकेमिकल संश्लेषण इसलिए नानो-संरचित सामग्रीको विस्तृत श्रृंखलाको बनावट वा परिमार्जनको लागि प्रयोग गरिन्छ। Sono-synthesis मार्फत उत्पादित नानोमेटेरियलका उदाहरणहरू न्यानो पार्टिकल्स (NPs) (उदाहरणका लागि, सुन NPs, चाँदी NPs), pigments, कोर शेल नानो-कणहरू, नानो-हाइड्रोक्सीपाटाइट, धातु जैविक फ्रेमवर्क (MOFs), सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (एपीआई), माइक्रोस्फेयर सजिलो न्यानो पार्टिकल्स, न्यानो कम्पोजिटहरू बिभिन्न अन्य सामग्रीहरूमा।
TEM छवि (A) र यसको कण आकार वितरण (B) चाँदीको नानो पार्टिकल्स (Ag-NPs), जुन Sonochemically इष्टतम परिस्थिति अन्तर्गत संश्लेषित गरिएको छ।
अल्ट्रासोनिक रूपमा प्रमोट गरिएको क्रिस्टलीकरण (सोनो-क्रिस्टलाइजेशन) पनि व्यापक रूपमा लागू हुन्छ, जहाँ पावर-अल्ट्रासाउन्ड सुपरस्ट्याचुरेटेड समाधानहरू उत्पादन गर्न, क्रिस्टलीकरण / वर्षा सुरु गर्न, र क्रिस्टल आकार र मोर्फोलजीलाई अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरू मार्फत प्रयोग गरिन्छ। Sono-crystallization को बारे मा अधिक जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
एक रासायनिक निलम्बन वा समाधान Sonicating उत्प्रेरक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण सुधार गर्न सक्छन्। सोनोकेमिकल उर्जाले प्रतिक्रिया समय घटाउँछ, तातो र मास ट्रान्सफरलाई सुधार गर्दछ, जसले पछि रासायनिक दर स्थिरता, उत्पादन, र सेलेक्टिविटीजमा परिणाम दिन्छ।
त्यहाँ असंख्य उत्प्रेरक प्रक्रियाहरू छन्, जसले शक्ति अल्ट्रासाउन्ड र यसको सोनोकेमिकल प्रभावहरूको प्रयोगबाट ठूलो लाभ गर्दछ। कुनै पनि विषम चरण स्थानान्तरण क्याटालिसिस (पीटीसी) प्रतिक्रिया दुई वा बढी अमिस्कृत तरल पदार्थ वा तरल पदार्थ-ठोस संरचना शामिल, Sonication, Sonochemical ऊर्जा र सुधारित जन हस्तांतरणबाट लाभ।
उदाहरणका लागि, पानीमा फिनोलको साइलेन्ट र अल्ट्रासोनिक-सहयोगी उत्प्रेरक गीला पेरोक्साइड ऑक्सीकरणको तुलनात्मक विश्लेषणले पत्ता लगायो कि सोनिकेशनले प्रतिक्रियाको उर्जा अवरोध कम गर्‍यो, तर प्रतिक्रिया मार्गमा कुनै प्रभाव पारेन। Rui मा फिनोलको अक्सिडेशनको लागि सक्रियता उर्जा3 Sonication समयमा उत्प्रेरक १ k केजे मोल पाईयो-1, जुन मौन अक्सीकरण प्रक्रियाको तुलनामा चार गुणा सानो थियो (k 57 केजे मोल)-1)। (रोखिना एट अल, २०१०)
सोनोकेमिकल क्याटालिसिस सफलतापूर्वक रासायनिक उत्पादनहरूको बनावटका लागि माइक्रोन- र न्यानो-संरचनात्मक अजैविक पदार्थहरू जस्तै धातु, मिश्र, धातु यौगिक, गैर-धातु सामग्री, र अजैविक कम्पोजिटहरूको निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक सहायताले पीटीसीको सामान्य उदाहरणहरू मिथाइल एस्टर (बायोडिजल), हाइड्रोलिसिस, वनस्पति तेलोंको saponication, Sono-Fenton प्रतिक्रिया (Fenton-like प्रक्रियाहरू), Sonocatalytic गिरावट आदिको फ्री फ्याट्टी एसिडको transesterization हो।
Sono-catalysis र विशिष्ट अनुप्रयोगहरूको बारेमा अधिक पढ्नुहोस्!
अन्य Sonochemical अनुप्रयोगहरू
तिनीहरूको बहुमुखी उपयोग, विश्वसनीयता र साधारण अपरेशनको कारण, Sonochemical प्रणालीहरू जस्तै UP400St वा UIP2000hdT रासायनिक प्रतिक्रिया को लागी कुशल उपकरण को रूप मा मूल्यवान छन्। हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स सोनोकेमिकल उपकरणहरू सजिलै ब्याच (खुला बीकर) को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ र एक सोनोकेमिकल फ्लो सेल प्रयोग गरी निरन्तर इनलाइन Sonication। Sono-synthesis Sono-synthesis, Sono-catalosis, गिरावट, वा polymeriization व्यापक रसायन विज्ञान, नानो टेक्नोलोजी, सामग्री विज्ञान, फार्मास्यूटिकल्स, सूक्ष्म जीवविज्ञानका साथै अन्य उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
उच्च प्रदर्शन Sonochemical उपकरण
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स तपाईको नवीन, अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिकेटरहरू, सोनोकेमिकल फ्लो सेल, रिएक्टरहरू र दक्ष र भरपर्दो सोनोकेमिकल प्रतिक्रियाहरूको लागि सहायक उपकरणहरूको शीर्ष आपूर्तिकर्ता हो। सबै हिलस्चर अल्ट्रासोनिकेटरहरू जर्मनीको टेल्टो (बर्लिन नजिक) मा रहेको हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स मुख्यालयमा विशेष डिजाइन, निर्माण र परीक्षण गरिएको छ। उच्च प्राविधिक मापदण्ड र उत्कृष्ट बृद्धि र २ efficient/7/365 highly अति अपर्याप्त अपरेशनका लागि अपरेसन बाहेक, हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू संचालन गर्न सजिलो र भरपर्दो छ। उच्च दक्षता, स्मार्ट सफ्टवेयर, सहज मेनू, स्वचालित डेटा प्रोटोकलिंग र ब्राउजर रिमोट कन्ट्रोल मात्र केहि सुविधाहरू हुन् जसले हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्सलाई अन्य सोनोकेमिकल उपकरण निर्माताहरूले भन्दा फरक पार्दछ।
निश्चित रूपमा समायोज्य आयामहरू
आयाम भनेको Sonotrode (अगाडी अल्ट्रासोनिक प्रोब वा हर्न पनि भनिन्छ) को अगाडि (टिप) मा विस्थापन हो र अल्ट्रासोनिक cavation को मुख्य प्रभाव पार्ने कारक हो। उच्च आयामको अर्थ अधिक तीव्र cavation हो। काभेटेशनको आवश्यक तीव्रता दृढतापूर्वक प्रतिक्रिया प्रकार, रासायनिक अभिकर्मकहरू र विशिष्ट सोनोकेमिकल प्रतिक्रियाको लक्षित परिणामहरूमा निर्भर गर्दछ। यसको मतलब भनेको आयाम स्तरमा ध्वनिक cavitation को तीव्रता ट्यून गर्न क्रमबद्ध रूपमा ठीक समायोज्य हुनुपर्छ। सबै हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू भरपर्दो र सटीक तरीकाले आदर्श आयाममा बुद्धिमान डिजिटल नियन्त्रण मार्फत समायोजित गर्न सकिन्छ। बूस्टर सीsहरू थप रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ मेकानिकल तरिकामा विस्तार वा विस्तार गर्न। अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर धेरै उच्च आयाम वितरित गर्न सक्छन्। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै निरन्तर २ 24/7 अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ। अझ उच्च आयामका लागि पनि, अनुकूलित अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडहरू उपलब्ध छन्।
Sonochemical प्रतिक्रियाहरूको समयमा सटीक तापमान नियन्त्रण
काभेटेशन हट-स्पटमा, धेरै हजार डिग्री डिग्री सेल्सियसको अत्यन्त उच्च तापक्रम अवलोकन गर्न सकिन्छ। जे होस्, यी चरम तापक्रम स्थानीय रूपमा मिनेट ईन्टीरियर र इम्प्लोडिing क्याभेसन बबलको वरपर सीमित छन्। थोक समाधानमा, तापक्रमबाट तापक्रम एक वा केही केभेट बुब्बलहरू नगण्य छ। तर लामो अवधि को लागी लगातार, गहन Sonication थोक तरलको तापमान को वृद्धि को कारण हुन सक्छ। तापक्रममा भएको वृद्धिले धेरै रासायनिक प्रतिक्रियाहरूमा योगदान गर्दछ र प्राय: फाइदाको रूपमा लिइन्छ। यद्यपि बिभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाहरूमा फरक इष्टतम प्रतिक्रिया तापमान हुन्छ। जब ताप-संवेदनशील सामग्रीहरूको उपचार गरिन्छ, तापमान नियन्त्रण आवश्यक हुन सक्छ। सोनोकेमिकल प्रक्रियाको बखत आदर्श थर्मल अवस्थाको लागि अनुमति दिनको लागि, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले सोनोकेमिकल प्रक्रियाहरूमा सटीक तापक्रम नियन्त्रणको लागि विभिन्न परिष्कृत समाधानहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै सोनोकेमिकल रिएक्टरहरू र कूलि jac जाकेटमा सुसज्जित प्रवाह कोषहरू।
हाम्रो सोनोकेमिकल फ्लो कोशिका र रियाक्टरहरू कूलि jac ज्याकेटका साथ उपलब्ध छन्, जसले प्रभावकारी तातो खण्डनलाई समर्थन गर्दछ। निरन्तर तापमान अनुगमनको लागि, हिलस्चर अल्ट्रासोनिकेटरहरू प्लग योग्य तापमान सेन्सरले सुसज्जित छन्, जुन थोक तापमानको निरन्तर मापनका लागि तरलमा घुसाउन सकिन्छ। परिष्कृत सफ्टवेयरले तापक्रम दायराको सेटिंगलाई अनुमति दिन्छ। जब तापमान सीमा नाघ्छ, अल्ट्रासोनिकेटर स्वचालित रूपमा रोकिन्छ जब सम्म तरलमा तापमान एक निश्चित सेट पोइन्टमा न्यून हुन्छ र स्वचालित रूपमा फेरि सोनिकेट गर्न सुरु हुँदैन। सबै तापक्रम मापनका साथै अन्य महत्त्वपूर्ण अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया डाटा स्वचालित रूपमा बिल्ट-इन SD कार्डमा रेकर्ड हुन्छ र प्रक्रिया नियन्त्रणको लागि सजीलो परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
तापमान सोनोकेमिकल प्रक्रियाहरूको महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर हो। हिल्सचरको विस्तृत टेक्नोलोजीले तपाईंलाई तपाईंको सोनोकेमिकल एप्लिकेसनको तापमान आदर्श तापमान दायरामा राख्न मद्दत गर्दछ।
किन हेलस्क्रिप्ट अल्ट्रासोनिक्स?
विश्वसनीयता & दृढता
ब्याच & क्रममा
कुनै भोल्यूम को लागी
स्मार्ट सुविधाहरू (उदाहरणका लागि डेटा प्रोटोकलिंग)